ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့အကြောင်းအရုပ်ဆိုးအမှန်တရား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 30 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ချိန်းတွေ့ရှည်လျားကတည်းကအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်. သို့သော်, ယနေ့၏ချိန်းတွေ့က 60 အတွင်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ရာမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်, 70့, 80s နှင့်ပင် 90.
ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ပေါက်လာအင်တာနက်၏နှင့်အတူထွန်းကားဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အဓိကအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်. ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ယနေ့ခေတ်စေသောအရာတို့ကိုအများကြီးရှိတယ်နေစဉ် (အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကယ်စင်စစ်သူတို့ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်), အကုသိုလ်၏ရှေ့တော်မှောက်လွန်းကိုငြင်းမရနိုင်ပါ. အောက်ဘက်မှာတော့အဲဒီအကုသိုလ်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအရုပ်ဆိုးအမှန်တရားတွေရှိတယ်.
လြယ္ကူဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့်အတူလူသားများပေးထားတဲ့အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ယနေ့တွင်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လူပင်သူတို့သွားကြမိုင်ခန့်ဝေးပါတယ်အချင်းချင်းထိတွေ့နေဖို့ get. သို့သော်, ဒီနည်းပညာနဲ့တိုးတက်ဖို့လည်းစကားပြောဆိုရန်လူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီ.
ဟုတ်ကဲ့, သင်ညာကဖတ်ရှုပြီး; လူအများစုကယနေ့သူတို့ရဲ့ချစ်ရာသခင်၏စကားသံကိုနား ထောင်. မှတပ်မက်ကြဘူး, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများဆက်တိုက်သူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်ဆောင်. ဘာအကြောင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု? Oh, အများစုသောသူတို့သည်အတိတ်၏အရာဖြစ်ကြ၏.
2. သင့်အနေဖြင့်တဦးတည်းဖြစ်၏, သင်မသိဘဲမှန်လျှင်
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦး၏နှလုံးအနိုင်ရချင်တယ်? ယနေ့တွင်, ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေ၏အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမသိဘဲအားဖြင့်ဖြစ်တယ်. သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်ဖို့ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, သင်လျော့နည်းဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, အဘယ်သူမျှမလုနီးပါးအကျိုးစီးပွားဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်.
Decoding တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဝေးပစ္စုပ္ပန်မျိုးဆက်မှပိုင်ဆိုင်လူတွေစိုးရိမ်နေကြပါသည်နီးပါးမတတ်နိုင်. မှာအားလုံးအထင်ကြီးသင်တို့နှင့်အတူအမကသူတစ်ဦးနည်းတူပြုမူသည်နှင့်သင်တို့အထဲ၌အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သူ / သူမမျက်နှာပေါ်တွင်လည်းအလားတူကြည့်ရှိပါတယ်. လူအများစုဟာ, ယနေ့တွင်, စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြဘယ်လိုမေ့လျော့နေနှင့်သူတို့ကအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောင်ထင်ပါပြီ.
4. ပိုက်ဆံ, ငွေနှင့်ငွေနှင့်ထို့နောက်အသွင်အပြင်လာ
အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်သည်လူကိုအဓိကအားဖြင့်မှန်သည်; မိန်းမတို့အဘို့, ဒါကြောင့်အခြားလမ်းလှည့်လည်ဖြစ်လိမ့်မည် (ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးနှင့်ငွေလာ). တိုတိုပြောရရင်, သင်ချိန်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်၌စိတ်ဝင်စားမည်လောသင်ကဲ့သို့ဝေးအဲဒီနှစ်ခုအကြောင်းရင်းများကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်အဖြစ်ရပ်တည်နေသည့်နေရာတွင်အပေါ်မူတည်. ဟုတ်ကဲ့, သာအဲဒီနှစ်ခု; အရာရာတိုင်းကိုအဲဒီနောက်ကြွလာ.
ယနေ့စည်းရုံးရေးရင်ခုန်စရာလာစရာလည်းလွယ်ကူဖြစ်ကြပါပြီ. သင်ကဖုန်းခေါ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးသင်တို့အဘို့ဖယောင်းတိုင်အလင်းညစာကိုစုစည်းပြီးမည်. ဒီအချက်ကအစောပိုင်းကထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များနှင့်အတူပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ကျက်သရေတမှေးမှိန်ခဲ့သည်.
6. privacy? အဘယ်အရာကိုသီးသန့်တည်ရှိမှု?
ယနေ့ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကဘယ်အရာမျှမရှိပါင်. သင့်အနေဖြင့်မွန်းလွဲပိုင်း၌ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရက်စွဲပါများနှင့်ညဦးယံအချိန်အားဖြင့်သင်တို့၏နှစ်ဦး၏ဓါတ်ပုံ creepy စာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူထင်မြင်ချက်များ၏ A စီးရီးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်အခြားသူတစ်ဦး၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွင်အတူတကွနှိပ်ကြည့်ရှုမည်. သင်ကမသုံးနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်ဤလူမျိုးအားမပိုင်ကြဘူး.
7. ကျော်မယ့်ဟု ဆို. ယခုအလွန်လွယ်ကူသည်
့စာသားနဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်တို့သည်နောက်တဖန်သူ့ကိုသူ / သူမအတွက်စိတ်ဝင်စားကြကြောင်းသိရကြလိမ့်မည်. တစ်ခါတလေပြိုကွဲစာသားများ့စုံတွဲတစ်တွဲသို့မဟုတ်စကားများမဆံ့. တကယ်လွယ်ကူဆက်ဆံရေးတက်ကိုချိုးဖောက်သည်?
ယနေ့တွင်, လူသည်ဧကန်အမှန်ပိုပြီးစိတ်မရှည်နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်လာကြပါပြီ; အချိန်မရှိခြင်းစတဲ့အဓိကနတ်ဆိုးစွဲသောသူသည်. သို့သော်, ဒါကြောင့်သူတို့ကဆဲကိုချစ်ရန်လိုချင်သည်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်မရနိုင်ပါနှင့်ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုခံရ. ဒါကြောင့်, ချိန်းတွေ့ကအတိတ်တွင်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကဲ့သို့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာကြသောအခါမကြာမီအချိန်ရောက်လိမ့်မည်.
7 ကိုယ်တော်ကိုမတ်ေတာတျော၌ Fall Make မှရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ